Somalida Ku nool qurbaha oo ayaantaan dilkooda soo badanayo | www.SomaliAction.tk
Somalida Ku nool qurbaha oo ayaantaan dilkooda soo badanayo
Posted on August 21, 2008 August 21, 2008 by Ahmed Kadiye
marxuum Somali ah
Wadankoodii hooyo ayay nabad la’aan iyo dil oga carareen hadii lagu dilo meeshii ay tageena soo dhib weyn maaha …
Maxay tahay dilka lagula kacaayo Somalida qurabaha degan?
Wadamadeese ugu badan yihiin ?
Sanadkan 2008 imisa qofood oo somalida qurbaha ayaa la dilay?
Xageese lagu kala dilay …??
SOMALITALK – QURBAHA Agust 21, 2008
June 25, 2008: Nin Soomaaliyeed oo Toogasho Lagu Diley, Walaalkiisna Lix bilood ka hor ayaa lagu diley Minneapolis….
Habeenimadii Arbacada (qiyaastii 4:30 am) waxaa Brooklyn Center (oo la ollog ah Minneapolis) lagu toogtey nin Soomaaliyeed oo da’diisu tahay 31-jir, magaciisana la oran jirey Maxamed Jaamac. Waxaana lagu hor toogtey Hotel uu kusoo booqanayey saaxibadiis oo ka tirsan ciyaartoyga Somali Basketball, sida uu weriyey TV-ga KSTP.
Marxuumka la diley waxaa sidaas oo kale walaalkiis toogasho lagu diley lix bilod ka hor Minneapolis. Video Warka ka daawo Halkan…
Police-ka Cape Town, K/Afrika ayaa gacanta kusoo dhigey nin ku eedeysan dilka Ganacsade Soomaali ah oo April 13, 2008 la diley, Marxuumka la diley oo magaciisa la oran jirey… Akhri halkan..
Magaalada Minneapolis ee USA waxa habeenimadii Sabtidu soo geleysey (April 12, 2008) toogasho lagu diley Arday Soomaaliyeed oo da’diisu ahayd 18-jir.
Ciidamada Police-ka ee Toronto ayaa Xabsiga dhigay qof oo lagu eedeynayo dilka wiil Soomaali ah, oo magaciisa la oran jirey Abdikarim Ahmed Abdikarim, oo ay ku toogteen banaanka dhisme ku yaal Magaalada Toronto ee Caasimada Canada [March 14, 2008] oo tacshiirad lagu furay marxuumk aiyo koox dhalinyaro ah oo gaarayay shan… Akhri warka oo dhan…
Anfac Sh. Cali Cabdalla, iyo Nuur Ibraahim ayaa 48 saac ee lasoo dhaafey lagu diley gobolka barwaaqo- sooranka ah ee Guateng dalka K/Africa. Labbadani muwaadhin oo aan midkood aaskiisa ka qeyb galay, ayaa lagu kala diley tuulooyin ku kala yaala duleedka magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria, labo dhacdo oo kale gadisan balse isku natiijo ku dhamaaday ”Dil”…. AKhri Halkan…
Wiil Soomaali ah ayaa lagudiley Liverpool kaddib markii dhaawac looga geystey madaxa. Wiilka dhintay ayaa magaciisa la oran jirey Axmed Maxamed Ibraahim [Ahmed Mohammed Ibrahim], waxayna da’diisu ahayd 17-jir.
Waxaa jariidadu saraakiil ka soo xigatey in dhibanayaasha iyo inta kale ee arrinta ka qayb qaatay ay dhammaan ahaayeen wiilal Soomaali ah. Waxaana baaris lagu hayaa in arrintu la xiriirto gangs iyo in kale…
Jan 6, 2008: Laba Dhallinyaro Soomaaliyeed oo Lagu Gubey K/Africa…
Laba Soomaali ah oo markii la toogtey kaddib dab lagu Gubey Xaafadda Duncan Village ee East London, Eastern Cape, Koonfur Afrika…..
Afeyeen u hadlay police-ka oo lagu magacaabo Captain Stephen Marais ayaa saxaafada u xaqiijiyey in gacanta lagu hayo nin 29 jir ah oo ku eedeysan dilka, dhaca iyo dab qabadsiinta labo nin oo ah dhalinyaro soomaaliyeed, oo habeenkii axada abaaro 2:34 laga heley dukaankooda dhexdiisa iyagoo jirkooda ku yaalaan xabado, si xuna u gubtey kadib dab la qabadsiiyey, kaasoo gubey hantidii dukaanka tiiley.Sida SomaliTalk.com uu u xaqiijiyey Suldaan M. Abdi oo ah arday wax ka barta jaamacad K/afrika ku taala, oo goobta falku ka dhacay u tagay aaska , nimanka dhalinyarada ah ee la gubey ayaa lakala oran jirey Saciid Khaliif Jaamac, 17 jir (shaqsigii ugu da’da yaraa oo loo dilo dhawaanahay sidaasi foosha xun), iyo Badal Sh. Maxamed, 26jir, labada dhibane ayuu sheegey in eey dukaanka shaqaaale ka ahaayeen, isla markaasna eey kaligood hurdeen markii saqdii dhexe habeenkii axada ee taariikhdu eey ku beegneyd 06/01/08 eey koox hubeysan albaalka kusoo jabisay qufuladii tacshiirad, kadibna gudaha usoo dhaadhacay,…. Akhri warkan oo dhan… Guji…
Jan 1, 2008: Shalay galinkii dhexe ayaa dhowr nin oo aan heebtooda la garanaynin oo hubeysay u dhaceen dukaan tuulo ku yaala oo rag soomaali ah leeyihiin, xilli 3 nin oo soomaali ah oo qaar ka shaqeeya iyo kuwa leh isugu jirey eey ku sugnaayeen gudaha tukaanka dhibtu ka dhacday, ragii hubeysnaa ayaa si aan loo miidaan dayin u furey xabadi, kuwaasoo midii ugu horeysey eey haleeshay Cumar Cabdi Nuur, 27 jir, tukaankana shaqaale ka ahaa, isla markaasna dalka yimid 13/11/07. isla maalintaasna shaqo u tagay isla tukaanka uu shaly ku geeriyoodey. Akhri warka oo dhan….
Wiil Somaaliyeed oo lagu dilay Galbeedka London…
May 8, 2007: Waxaa magaalada London, xaafadda Islington, lagu diley nin Soomaaliyeed oo da’diisu ahayd 41-jir magaciisana la oran jirey Mohamed Ali Maslah, ahaan aabbe dhalay shan carruur ah, wadenya Taxi. Sida laga soo xigtey booliska waxaa marxuumka mindi lagaga dhuftay wadnahana. Waxaana boolisku ay marxuumka heleen qiyaastii 3am.
Xaaskiisii oo magaceeda la yiraahdo Sahra, oo 35-jir ah, waxay tiri: “Ninkaygii waxa uu ahaa nin aad hawl-kar ah oo ku dadaalayey sidii uu u korin lahaa qoyska, waxa uu ahaa aabbe wanaagsan”, aad ayeyna uga murugootey geeridaas naxdinta leh.
Waxaa Isniintii casarkii si arxan darro ah loogu toogtay xaafada Fillipi ee Caasimada Cape Town, Allaha u naxariistee Marxuum Axmed Cusmaan Qayre, oo da’adiisa lagu qiyaasey 24 jir, kadib markii ay burcad aan weli faah faahin laga helin ay ugu soo galeen dukaan uu ku sugnaa iyadoo mulkiilayaashii dukaankaas ay dibada ku maqnaayeen.
Marxuumkaan ayaa waxaa uu wadankaan Koonfur Afrika soo galay mudo lagu qiyaasay sadex bilood asagoo ka soo cararay dhibaatooyinka ka aloosan dhulkiisii hooyo. Hadaanu nahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Caasimada Cape Town waxaanu ka xunahay dhibaatada xasuuqa iyo barakaca ah ee ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa DFKM ah ay ka wadaan caasimada Muqdishu, taasoo hoos u ridey rajadeenii ahayd inaan fursad u helno sidii aan dib ugu soo noqon lahayn dhulkeena hooyo taasoo naga kaafin lahayd darxumada, karaamo la’aanta iyo dilalka nalaku bartilmaameedsanaayo.
Maxaan taageero ah oo aan ka sugaynaa dowladii loo hanweeynaa, mar hadii ay shacabkeedii si naxariis daro ah u gumaadayso, yaase nalooga haybeeystaa mar hadii dadweeynihii ay dowladahoogu na martigaliyeen daawanayaan dowladii Soomaaliyeed oo shacabkeeda xasuuqaysa.Cidkasta oo Soomaaliyeed ee gacan ka gaysan karta falalkaan wuxushnimada ah ee lagula kacaayo xoogsatada aan waxba galabsan waxaan ka codsaneeynaa ineey nagu soo biiriyaan wixii karaankooda ah ee ay nagu taageeri karaan.
Sawirada aaskii marxuumka ka eeg halkan….
Laakiin cabbar kaddib, ayaa nin soo laabtay oo gaarigii ninka wax toogtey ka kaxeeyey meeshii, waxaana warku sheegay in gaarigaas iyo ninkii wadey la qabtay oo su’aalo la weydiinayo. Lama hubi in ninka la qabtay uu yahay kii dilka geystey iyo in kale, laakiin waxaa la hayaa gaarigii uu watey.
“Waxa uu marxuumku ka soo cararay dagaalka ahliga ah ee Soomaaliya, waxana uu doonayey in uu carruurtiisa ku koriyo meel ammaan ah” sidaas waxaa yiri Mohamed Baraki oo ay ilma adeer labad ahaayeen marxuum Feisal Omar.
Siddeeda Carruurta ah ee uu marxuumku ka tegey waxay da’doodu u dhexaysaa 1 ilaa 13 sano jir.
Ganacsade Soomaaliyeed oo lagu diley Magaalada Port Elizabeth ee K/Afrika:::Faafin: Sabti: Nov 18, 2006
Dilka lagu hayo Soomaalida ku dhaqan K/Afrika ayaa ah mid faraha ka baxay oo aysan jirin cid wax ka qabaneysa. Haddaba maxaa la gudboon Soomaalida.. Fadlan akhri qormada Soomaalida K/Afrika: Cidna uma maqna Ceelna uma qodna, isla markaana talaadaada u gudbi qoraaga GUJI HALKAN….
Sept 19, 2006: Yusuf Bahar Abdullahi Sheekow waxaa lagu dhex diley dukaan uu lahaa oo…. Akhri…
Nin Diley Caruurtiisii !! – Maxaa ka Qaldan Soomaalida Qurbaha?
Hooyada dhaawaca ah magaceedu waa Fatuma Amir waana 29-jir, afarta carruurta ah geeriyoodey magacyadoodu waa Sidi, Fatuma, Khadija iyo Goshany, waxana ay dhasheen intii u dhexeysay 1998 iyo 2003 [da’dooduu ahayd: 8, 7, 4, 3 sano jir], Sida uu sheegay Cusmaan Nuur (Osman Noor) oo ay walaalo yihiin Fatuma Amir oo ah hooyada carruurta dhashay.
Dad hor tuban gurigii dilku ka dhacay | Sawirada oo weyn ka fiiri… | Isha: Courries Journal
Waxaa wararku sheegeen in dhaawaca Fatuma Amir uusan halis ahayn oo lagu daweynayo cusbitaalka “University Hostpital”. Waxaana wararku sheegeen in madaxa uu dhaawac ka gaarey.
Telefishanka WAVE-3 waxa uu sheegay in loomalaynayo sababtu uu ninkani qoyskiisa u diley in ay ahayd in uu xaaskiisa uga shakiyey gogol dhaaf. HALKAN DAAWO…
Somali killings are ‘not xenphobic’ – police
Gabar Soomaaliyeed oo Hooyadeed Mindi ku dishay dalka NorwayAugust 31, 2006: Inkastoo ay tani tahay midi ugu horeeysay ee nooceeda waayadan qurbaha ka dhaca hadana ilaa iyo iminka lama oga sababta gabadhani ay hooyadeed mindida ugu dishay.
Su’aasha hadaba la isweydiinayo ayaa ah maxaa kalifay gabadhani oo da’deeda lugu sheegay 18 jir in ay hooyadeed disho. Xirriiro aan Norway la sameeyey ayaa ii sheegay in gabadhani ay waayadan dambe xirriirka ay hooyadeed la laheyd uu aad u xumaa. Sidoo kale dadkii aan la xirriiray ayaa misna i isheegay in gabadhu laheyd uur lana qabo. Markii shilkan dhacayey adeerkii hooyada qabay uu joogay guriga muxuuse gacan ah oo ka geystay si xaaskiisa uga badbaadiyo dilka ay gabadheeda u geystay?
Toronto: Gabar 20-jir ah oo Meydkeedii laga Helay Bac taal meel Qashinka Laga Qaado….
BOSTON, USA: Magaalada Boston waxaa habeenimadii Axad (June 25, 2006) toogasho lagu diley wiil Soomaaliyeed oo magaciisa la oran jirey Cabdirauf Cabdullahi, da’diisuna ay ahayd 19-jir.
Aaskii marxuum Abdirauf Abdullahi | Boson, June 27, 06 | http://www.boston.com
“Waxa ay ka yimaadeen Afrika ayagoo ka soo cararay rabshado, waxaa xabbadi ugu suu gashay gurigoodii (Memphis),” ayuu yiri Cabdirahman Yuusuf, waxana uu intaas raaciyey “haddana tan ayaa dhacday.”
Talaada (June 27, 2006) ayaa marxuum Cabdirauf Cabdullahi lagu aasay Boston. Marxuumka hooyadiis oo magaceeda la yiraahdo Faadumo Maxamed ayaa TV-ga Boston ee Channel 5 waxa ay u sheegtay in wiilkeedi la diley uu ahaa “Wiil aad iyo aad iyo aad u wanaagsan”. Halkan ka daawo Aaskii Marxuumka.
VIDEO: Channel 4 halkan ka daawo…
DAAWO: Warbixinta 7.NEWS BOSTON oo ka hadlaya dilka wiilka Soomaaliyeed….
Dhamaadkii bishii May ee 2006 ayey ahayd markii Minneapolis/St. Paul lagu diley 19-jir Soomaaliyeed oo dhiganey koleejo… (Warkaas hoos ka akhri.)
Habeenimadii Isniinta (May 29, 2006) qiyaastii markey saacadu ahayd 3:30 am ayaa toogasho lagu diley wiil Soomaaliyeed oo da’diisu ahayd 19-jir. Dilku waxa uu ka dhacay halka ay iska gooyaan labada waddo ee University Ave. iyo Berry St. oo ah meesha ay ku kulmaan labada magaalo ee mataanaha ah St. Paul iyo Minneapolis. Meeshas oo aad ugu dhow xarunta Telefishanka Channel 5, halkaas oo rasaasta laga maqlay.
VIDEO: Daawo Warkii Televisionka Channel 5…. Guji…
May 2006: Meydkii marxuumad Sudi Abdi laga helay webiga Mississipi, waxaana lagu aasay Minneapolis., (iyo Cabdirisaaq Xaaji Xuseen oo Tacsi u diray Qoyskii ay ka geeriyootey Sucdi Cabdille Cusmaan Guji…)
Abdihakim Adam waxaa da’diisu ahayd 28-jir.
Ilyas Ahmed oo 37-jir oo la hadlayey jariidad ka soo baxda Atlanta ayaa yiri “Abdihakim Adam waxa uu ahaa Soomaali, walaalkay muslim ayuu ahaa”.
Video ka Daawo Halkan…
Halkan ka daawo Video Soomaalida oo Bannanbaxaysa… | Isha Videoga Ololfilm.com:
HALKAN KA DAAWO WARKA TELEFISHANKA ONN… |
Soomaalida halkaas isugu timid waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid yihiin “waxaan rabnaa caddaalad” iyo erayo kale oo caro ah oo ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin dilkii marxuum Naasir Cabdi oo sarkaal boolis ah uu toogashada ku diley.
Liibaan Ismaciil oo u hadlayey dadka bannaanbaxayey ayaa yiri “waxaan rabnaa in runta bannaanka la soo dhigo”, sida ay werisey shabakada ABC NEWS oo soo xiganeysey hay’adda AP.
Halkan ka daawo Video Soomaalida oo Bannanbaxaysa…
Halkan ka daawo Soomaalida Columbus oo aad uga caraysan dilkaas… DAAWO (ONN-TV)
USA: Dec 29, 2005: Nin ayaa lagu diley xaafadda Cassady Village Trace oo ku taal woqooyig amagaalada Columbus, Ohio, laakiin ninkani ma hub ayuu haystey markii saraakiisha booliska ee degmada Franklin ay toogtey? sidaas waxaa is weydiiyey Telefishanka ONN [Ohio News Now]. [HALKAN KA DAAWO WARKA TELEFISHANKA ONN…]
Ayaan Maslax waxay tiri, “Boolisku waxay adeegsan lahaayeen hab kale oo ay ku joojiyaan ama kula hadlaan qof maskaxda looga jiro.”
HALKAN KA DAAWO WARKA TELEFISHANKA ONN…
Dec 23, 2005: Ciidamada yemen oo Rasaas ku Furay Qaxooti Soomaaliyeed… Guji
Warkii hore ee sida gaariga loo jiirsiiyey marxuumad Luul Ibraahim…. Guji…
Wiil Soomaaliyeed oo La Toogtey Asagoo Dhex Fadhiyey Gaari Taagan Meel Gaaska Laga Qaato oo ku yaal Magaalada St.Paul, Minnesota, USA…
(SomaliTalk.com | St. Paul, MN | Aug 26, 2005): Habeenimadii xalay markii ay saacadu ahayd 11:15pm ayaa toogasho lagu diley wiil Soomaaliyeed oo da’diisu ahayd 19-jir. Waxa uu Wiilkaasi dhex fadhiyey gaari taagnaa meel gaaska laga qaato (BP Gas Station) oo ku yaal wadada Lexington oo u dhow meesha looga baxo wadada Highway I-94 oo dhex mara magaalooyinka mataanaha Minneapolis/St.Paul ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
TV-ga Channel.5 waxa uu sheegay in marxuum Maxamed Maxamuud Maxamed aysan jirin wax dembi ah oo uu hore u galay (wax fal dembiyeed ah kama oolayn booliska). Waxana uu TV-gu intaas ku daray in Ilaa hadda aan lahayn ama la garanayn cidii dilka geysatey, lamana garanayo ujeedada dilka. Waxaana boolisku uu dadweynaha ugu baaqay in qofkii arrinta dilkaas war u hayaa uu lasoo xiriiro booliska.. Warkii Channel.5: Ka Daawo Halkan…
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Minnesota waxay qoyska uu wiilkaas da’da yari ka geeridooy Allah uga baryayaan in uu samair iyo iimana ka siiyo, marxuumkana Allah u naxariisto.
Cali Maxamuud Cali, ay da’diisu ahayd 19-jir, waxa uu dhowaan ka soo laabtay Vancouver si uu uga qayb galo arooska saaxiibkiis.
Loyan Ahmed Gilao, waxaa da’diisu ahayd 23-jir, halka Ali Mohamud Ali, ay da’diisu ahayd 19-jir. Daawo halkan..
Gabar Soomaaliyeed oo Mindi ku Dishay Wiil ay saaxiibo ahaayeen Norway | SomaliTalk.com | Aug 13, 2005
Sarkaal u hadlay Ciidanka Booliska Dalka Norway oo lagu magacaabo Kjell Hjulstad ayaa shaaca ka qaaday in saaka aroortii guri ku yaal Xaafad ka mid ah Magaalada Oslo ee Dalka Norway in laga helay meyd Wiil Soomaaliyeed oo mindi lagu dilay, da’diisana lagu sheegay 28jir.
Sarkaalka oo la hadlayey Saxaafada ayaa cadeeyay in dilkan looga shakisan yahay gabar Soomaaliyeed oo magaceeda lagu sheegay Muna Ismaaciil oo loo yaqaan (AALIYAH) da’deena lagu sheegay 21jir.
Sarkaalka loo xilsaaray baaritaanka dilkan ayaa shaaca ka qaaday in Marxuumka la dilay ay da’diisu ahayd 28jir magaciisuna la oran jiray Marxuumka Xasan Warsame.
UK: Hooyo Soomaaliyeed oo Geeriyootey Kaddib Markii ay Kasoo Dhacday Daar Dheer Dabaqeeda 13aad.. Laakiin qaabka ay usoo dhacday iyo Qaabka ay Dhimatay waxaa kujira shaki…
Glasgow | UK | Aug 7,2005 : Hooyo Soomaaliyeed oo dhallin yaro ah ayaa geeriyootey kaddib markii ay ka soo dhacday dabaqa 13aad ee sar dheer, sidaas waxaa qortay jariidada Sunday Mail oo ka soo baxda dalka Ingiriiska. Meydkii hooyada oo da’deedu ahayd 27-jir ahaydna qaxooti ka timid Soomaaliya, haysateyn laba carruur ah, ayaa shalay laga helay magaalada Scotstoun, Glasgow. Deriska ayaa sheegay in habeenkii ka horeeyey (helitaanka meydkeeda) ay qaylo xooggan ka maqleen dhanka qolka ay daqaba ka deganayd hooyada Soomaaliyeed. Warka oo dhan guji halkan…
Booliska Ireland oo Shaaca ka Qaaday Aqoonsiga iyo Sawirkii Ninkii Soomaaliyeed ee Dublin Lagu Diley Horaantii Sannadkan 2005….
Farah Swaleh Noor oo Ireland ku noolaa ilaa 1996 waxaa meydkiisa la helay bishii March 30keedii, waxaana markaas da’diisu ahayd 38-jir.
Farah Swaleh Noor waxaa meydkiisa oo si xiriir ah toorey ama mindi loola dhacay oo la googooyey laga helay meel u dhow buundo dulmarta kanaalka Royal Canal bishii March ee sannadkan 2005, asagoo weliba madaxa laga gooyey, ilaa hadana madaxii lama helin. Waxaa wararku tibaxeen in meydka qaybta dhexe laga helay ayagoo kujira bac madow, gacmahana iyo luguhuna laga helay meel u dhow. [Eeg halkan…] iyo [Halkan].
Qaareen Soomaaliyeed oo magaciisa la oran jirey Ahmed Dabarran ayaa waxaa lagu diley magaalada Atlanta, Georgia, USA... GUJI… | May 11, 2001
“YEMEN::: Gacan ku dhiigle la soo Qabtay”
DIL KA DHACAY XERADA QAXOOTIGA EE AL-KHARAS, YEMEN….
Diyaariye/ Axmed Maxamed –
Nin Jarmal ah oo Diley Xaaskiisii oo Soomaali ah, Laba Carruur ah iyo Labadiisii waalid, asagiina is toogtey…. May 2005
Berlin ee dalka Jarmalka: Nin Jarmal ah oo daa’diisu tahay 41-jir oo degaan ahaan ka yimid magaalada galbeedka ee Rheinfelden ayaa diley xaaskiisii, labo carruur ah oo da’yar iyo labadiisii waalid. Saraakiisha boolisku markii ay tageen goobta dilku ka dhacay waxay halkaas ka heleen meydka xaaskii ninkaas oo u dhalatay Soomaaliya oo da’deedu ahayd 30-jir, gabar uu dhalay oo 7-jir ah, iyo wiil uu dhalay oo 4-jir ah iyo labadiisii waalid oo da’doodu tahay toddobaataneeyo. Waxa kale oo ay heleen ninkii oo sariir saaran oo si aad ah u dhaawac ah oo ay agtaal baastoolad. Guji…
Warka oo dhan ka akhri halkan… GUJI…
Faisa da’deeda waxay aheyd 21 Sano, waxay Canada timid October 04 sanadkii tagey, waxayna ka timid dalka Syria. Marxuumadda dhimatey Allah ha u naxariistee waxay la daganeyd gabar kale oo Canadian ah waxeyna deganeyd qol gaar ah.
Abu Qaasim Jeylaani waxaa bishii March 2002 toogasho ku diley booliska magaalada Minneapolis, USA… GUJI…
Saddexdaas dhallinayada ah waxaa magacyadoodu kala yihiin C/Kariim Xulusow, Maxamed Diiriye, iyo Xuseen Maxamed Axmed ‘Gurbe” sid ay werisey idaacada Daljir, waxaana warku intaas ku daray in dhallinyaradaasi ay ka soo jeedaan deegaan Hiiraan ee Soomaaliya. Waxaana dilkaas geystey burcad aan la aqoon haybtooda. Warar kale ayaa tibaaxaya in nin afar oo Soomaali ah dalkaasi lagu diley. Afarta nin oo la dileyba waxay ahaayeen ganacsato.
Warkan iyo warkale oo ku saabsan idaacado ku wajahan geeska afrika oo ay soo jeediyeen madax sare oo ka tirsan Maraykanku ka dhegeyso halkan…. [Isha: idaacadaha Wadajir (warka Koonfur Afrika) iyo Xoriyo (warka Idaacadaha)]
Dilkan oo La Sheegay in uu la Xiriirey QAAD (KHAT)…
“Qorshuhu wuxuu ahaa in ay marxuumada ka dhacaan Qaad iyo lacag. Qaadka oo ah mukhaadaraad dadka qabta oo lagu beero Afrikada Bari. Soomaaliya sharci ayuu ka yahay. Laakiin Ameerika waxa uu ak yahay sharci darro” sidaas waxaa tiri qareenka degmada Hennepin oo magaceeda la yiraahdo Amy Klobuchar…
MINNEAPOLIS – Shan Soomaali ah ayaa lagu soo oogey debig ah dilkii Yaasmiin Cali Geelle, waxaana dhammantood xabsiga loo taxaabay Isniintii.
Qareenka degmada Hennepin (Minneapolis), Attorney Amy Klobuchar, waxa ay tiri ‘waa dilkii ugu horeeyey ee la xiriira QAAD ee aan aragno.”
Sida uu weriyeey KARE11 TV, qareenka magaaladu waxa ay tiri “weligeen jaaliyadda uma soo celin karno Yaasiin Geelle, laakiin ugu yaraan waxaan ballan qaadeynaa in aan sharciga marsiin doono shanta nin”.
Kayser Osman waxa uu ahaa 15-jir Soomaaliyeed oo March 2002 lagu diley magaalada London, UK… GUJI…
Booliiska magaalada St. Cloud ee Gobolka Minnesota ayaa xabsiga u taxaabay nin da’diisu tahay 20-jir oo lagu tuhun san yahay dilkii marxuumad Yaasmiin Cali Geelle oo Bishan November 9keedii lagu diley magaalada Minneapolis.
Sida ay werisey hay’adda wararka ee AP, arinta xarigaas waxaa boolisku shaaca ka qaadeen Axadii shalay (Nov 28, 2004). Waxaana warku intaas ku daray in ninkaas laga qabtay guri kuyaal magaalada St. Cloud, kaddibna lagu wareejiyey Booliiska Minneapolis.
Yasmin Geelle, oo da’deedu ahayd 32-jir, waxaa meydkeeda laga helay qolkii ay deganayd oo ku yaalada magaalada Minneapolis markey taariikhdu ahayd Nov 9. Waxayna dalka maraykanka timid sannadkii 1993, xilligaas oo ay ka timid xeryaha qaxootiga ee Kenya. [Warkii hore hoos ka akhri].
Minneapolis (Nov 9, 2004 | Updated Nov 10): Warar aan ka soo xiganey warbaahinta Minneapolis ayaa shaaca ka qaaday in qof dumar ah oo Soomaali ah habeenimadii November 9, 2004 lagu diley magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, USA. Gabadha la diley waxaa magaceeda la oran jirey Yasmin Ali Geelle, waxayna Minneapolis ku noolay ilaa sannadkii 1995. Waxayan da’deedu ahayd 32-jir.
Wararkii u horeeyey ee dilka gabadha ka soo baxay waxay sheegeen in lagu diley mindi, laakiin warar kale ayaa tibaaxay in toogasho lagu diley. . Waxaana dilku ka dhacay dhanka koonfureed farsmagaalaha magaalada Minneapolis gaar ahaan xaafadda ‘The Adams Apartments‘ [500 S. 10th Street South]. Waxaa dilkaasi dhacay qiyaastii 2:50am ee waa soo dhowaadkii. Waxaa wararka qaarkood sheegeen in qof deggan xaafadaas uu maqlay qof ku qaylinaya ‘dab-damis’ sidaasna uu ku wacay 911, markii ay boolisku gurigaas yimadeena aysan arag wax dab ah.
“Qof ayaa soo wacay booliiska qaybta dabdamiska asagoo sheegaya in dab ka kacay qolka 105”, sidaas waxaa yiri Mike Carlson oo ka tirsan Booliska Minneapolis. Waxana uu intaas ku daray “Markii ay qaybta dabdamisku yimaadeen qolkaas, waxa ay heleen meydka qof dumar ah taas oo la tooreeyeeyay. Waxaana hadda bilaabeynaa baaritaan arintaas la xiriirta” [VIDEO: HALKAN KA DAAWO WARKA. CHANNEL 5 TV..]
Dhibaatada Qaran la’aanta
Aflaanta anshaxa xun, ruugidda Qaadka iyo isticmaalka Daroogadu Saamayn intee le’eg Bay ku Leeyihiin Faafidda Cudurka AIDSKA.
Ninkii dilay Labadii Dumarka ah ee Soomaaliyeed ee Samiira iyo Faadumo ayaa Booliska Kenya Su’aalo waydiinayaan
Gacan ku dhiiglihi Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi ku dilay labo Haween ah oo Soomaaliya Awees Ismaaciil Aways oo isagu Dilay Samiira Axmed Xasan iyo Faadumo Maxamed Xasan oo ku dilay Tooreey ayaa Booliska Magaalada Nairobi Gacanta ku dhigeen. Ninkan oo imanka ay gacanta ku hayaan Booliska Bangaani ee isla Xaafada Islii ayaa waxaa soo booqday Saxafiga la yiraahdo Axmed Yaasiin Maxamed Sooyaan oo ah Saxafi ka tirsan Idaacada Iqra FM ee Magaalada Nairobi, waxana uu ii sheegay in uusan qalbi ahaan dhameen oo xoogaa isku buuqsanaa ninkani, wali xaaladiisa meelna uma dhicin oo looma gudbin Maxkamad.
Bishii la soo dhaafay ee Agoosto waxaa kale oo dalka K/Afrika lagu diley wiil Soomaaliyeed oo da’diisu ahayd 16-jir. Abdikadir Garanage waxaa la diley 27kii Agoosto 2004. Sida ay werisey ha’yada wararka ee SAPA, wiilkan waxaa la diley asagoo soo booqday dukaan uu leeyahay adeerkiis, waxaana dukaanka ugu soo galay saddex nin oo hubaysan, nimankaas oo markii hore iska dhigay sidii kuwo dukaanka wax ka gadanaya (macaamiil), kaddibna mid ka mid ah ayaa markiiba rasaas furay. Waxaa kale oo la dhaawacay wiilka adeerkiis oo magaciisa la yiraahdo Danar Abdul. Waxaa wararku intaas ku dareen in tuugadii dilka geysatey ay dukaankii kala baxsadeen lacag aan cadadkeeda la sheegin. Inta la ogyahay wiilkaasi wuxuu tirada Soomaalida ee lagu diley K/Afrika ka dhigeysaa qofkii 25aad.
Markey taariikhdu ahayd Jimce Agoosto 28, 2004 waxaa magaalada Minneapolis lagu diley nin Soomaaliyeed oo da’diisu ahayd 61-jir. Inkasta oo aan ninkaas magaciisa si rasmi ah loo shaacin, hadana warbaahinta Minneapolis waxa ay magaciisa u qoreen in uu yahay: Abdullahi Dalmar Ali. Waxaa wararku sheegeen in marxuumka oo madaaxa laga dhaawacay laga helay meel wado ah (27th avenue south), waxaana uu u geeriyoodey dhaawacaas. Waxaa wararku intaas ku dareen in ay Booliska magaaladu raadinayaan ciddii falkaas geysatey. Jariidada StarTribune waxa ay marxuumka ka qortay in uu ahaa Abbe lahaa saddex wiil, xaaskiisiina ay kala tageen, waxana uu magaalooyinka mataanaha (St.Paul/Minneapolis) u soo guurey sannadkii hore asagoo ka soo guurey New York, waxana kale oo uu mar ku noolaa South America. Waxa uu haystey shahaado jaamacadeed oo ah ganacsiga [accountant], waxana uu ku hadli jirey Afar Luqadood oo kala ah: Arabic, Dutch, Somali iyo English.
Lix Qof oo Soomaali ah oo Lagu Dilay Nairobi Kenyan | Sept 2, 2004
Dad gaaraya lix qofood ayaa Sept 2, 2004 lagu dilay meelo kala duwan oo ka mid ah xaaffadda soomalida ee islii,kadib markii ay tuugo soo weerartay goobihii ay daganayeen ee ganacsi, dilkan waxaa kale oo dadkan laga dhacay lacago,illaa hadda ma jirto mid ka mid ah tuugaas dilka iyo dhaca gaystay oo la qabtay. Ganacsataada soomaaliyeed oo aan maanta wax ka waydiiya waxa ay yeelayaan ayaa ii xaqiiyay in aysan ahayn markii ugu horeysay oo lagula kaco fal dambiyeed noocan oo kale ah waxayna intaasi ku dareen in ay sameynayaa shaqo joojin ay kaga cabanayaan Ciidanka Amaanka in wax lagaga qabto tuugadan dhaca iyo dilka u gaysanaysa.
Inta badan waxaa dad badan shaki kaga jiraa tuugada iyo booliiska amaanka,waxayna dadku is waydiiyaan sababta loo waayo gurmad booliis marka ay dhacaan falalkan loona waayo booliiska,boolisku waxay ay ku eedaynayaan laftooda in aysan soomaalidu soo wargalin xiliga dhacaas loo gaysanayo. Habeen hore ayaa laba ka mid ah soomaalida lagu dhaawacay guryahooda,haddana lagu dawaynayo isbitaalka Kenyatta,waxaa aad u soo badanaya amaan darada deegaanada soomalidu ku badan iyadoo guud ahaan uu dalka kenya la ciirciirayo amaan daro iyo musuqmaasuq daran Hay’daha dowladuna ay mashquulsan yihiin is mucaaradid iyo musuqmaasuq taasna ay dhexda ka saartay howlihii amaanka ee ummaddu u baahnayd.
Soomaalidii ku dhintay Xeebaha talyaaniga….
… Taxi Wade lagu diley Seattle:: Feb 2004
… July 2003: Taxi Wade Soomaaliyeed oo magaciisa la oran jirey Ahmed Hussein Axme d oo lagu toogtey Minneapolis
….August 2003: Taxi wade Soomaaliyeed oo magaciisa la oran jirey Mohamed Ahmed Salah oo lagu toogtey Minneapolis
USA: marxuum Cali Warsame Cali (GABAN) oo ahaa oday Soomaaliyeed oo da’diisu tahay 66jir ayaa waxaa Arbaca 24 Octobar 2001 shaaca lagaqaaday in uu ku geeriyoodey Minneapolis. Marxuumka waxaa markey taariikhdu ahayd 14 Octoobar 2001 laga helay meel baska laga raaco uu kutaal ama u dhow agagaarka isgoyska E. 17th St. iyo Chicago Av. S. isaga oo lagaraacay, ama wajiga waxlooga dhiftay, waxaana markaas dhaawacaas awgeed ladhigay cisbitaalka lagumagcaabo Hennepin County Medical Center GUJI…
Johannsburg. 11 April 2004. Waxaa habeenimadii Sabti ah markii la tukaday salaada Maqrib ka dib dukaankisa oo ku yaala xaafada Njoli ee magaalada Port Elizabeth lagu dhex toogtay ganacsade Soomaali ah oo la yidhaahdo Cabdi Muxumed Horor (Cabdi Cuur) 38 Jir.Qofkii 20aad ee Soomaali ah oo lagu diley K/Afrika
Habeenimadii Axada 25 May 2003 goor ku dhaw 7.00 fiidnimo (Hal saac oo fiidnimo) ayaa dukaan uu gadayay lagu dhex toogtay wiil dhalinyara ah oo Soomaaliyeed oo la yidhaahdo Shaafi Bille C/Laahi. GUJIQofkii 19aad ee Soomaali ah oo lagu dilay K/Afrika
Ganacsade Soomaaliyeed oo la yidhaahdo Diiriye Maxamuud Maxamed oolagu dilay gurigiisa oo ku yaala Johannesburg…. GUJI 13/12
Ahmed Dabarran oo ahaa 32 jir, waxa uu qareen (prosecutor) maxkamadeed ka ahaa degaanka “Fulton County” ee kuyaal Atlanta, USA GUJI… May 11, 2001
HALKAN KA AKHRI WARARKII HORE EE SOOMAALIDA U SOO QAXDAY QURBAHA… GUJI
← MUXAMMAD HALOO DIRO AQALKA US CONGRESS
Sheekooyin gaaban oo ila qosal ah →